एजेन्सी इस्लामावाद, १७ जेठ
पाकिस्तानले कोरोना भाइरसका कारण बन्द रहेका अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरू गरेको छ । पाकिस्तानले शुक्रबार रातीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरू गरेको हो ।
पाकिस्तान सरकारले कोरोना संक्रमणका कारण यसको नियन्त्रण गर्न नियमित गतिविधिमा पनि रोक लगाएको थियो । तर, शुक्रबारदेखि यहाँका अन्य नियमित गतिविधिहरूमा पनि खुकुला पार्ने नीति लिएको छ । उक्त निर्णयसँगै अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा लगाएको प्रतिबन्ध पनि शुक्रबार रातीदेखि नै फुकुवा गरेको बताएको छ ।
पाकिस्तान नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले शुक्रबार एक सूचना जारी गरेर सो जानकारी दिएको थियो र सोही बमोजिम शुक्रबार रातीबाट उडान सुरू भएको हो । प्राधिकरणले देशभित्रका आन्तरिक उडानहरूलाई पनि विस्तारै विभिन्न चरणमा गरी यसअघि नै सुरू गरिसकेको छ ।
पाकिस्तानबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू शुक्रबार राती २३ः५९ पछि सुरू भएका समाचारमा जनाइएको छ । पाकिस्तानबाट विदेशका लागि हुने उडानका लागि आवश्यक प्रक्रिया सरकारले पहिले नै तोकेको थियो । यहाँबाट गरिने विदेशी उडानहरुका लागि विमान कम्पनीहरूले गन्तव्य देशको नियमलाई पालना गर्नुपर्ने गरी नियम बनाइएको छ ।
हरेक विमानलाई उडान सुरू गर्नुपूर्व स्यानिटाइज गर्ने तथा विमानस्थलमा भिडभाड नगर्नेलगायतका स्वास्थ्यसम्बन्धी सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाउनुपर्ने नियम यहाँका उड्डयन अधिकारीहरूले बनाएका छन् ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ १७, २०७७, २२:३२:००
कोरोना कोषकाे १ करोड रक्सीमै स्वाहा !
सप्तरीमा खाली हुँदै क्वारेन्टाइन
अस्थिर बन्दै सेयर बजार, कुन-कुन कम्पनी उकालो लाग्दै छन् ?
सेनाले बनायो रोल्पाका स्थानीय तहमा हेलिप्याड
तनहुँमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण सुरु